S: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
J: Waxaan nahay warshad ka kooban shirkad madaxbanaan SBS Zipper Group (Warshadda labaad ee adduunka ugu weyn), oo la aasaasay 2002, Quanzhou, Shiinaha. Maanta, waxaan ka shaqeynaa mitir laba jibbaaran 2000 oo aan u dhoofinno in ka badan 50 + waddan oo adduunka ah. Ku soo dhawow inaad na soo booqato!
S: Miyaan u habeyn karaa si waafaqsan shuruudahayga?
J: Xaqiiqdii, koox khibrad u leh R & D ayaa diyaar u ah inay ku buuxiso shuruudahaaga gaarka ah. Waxaan soo saareynay noocyada caanka ah ee adduunka sida OEM sanado badan. OEM iyo ODM labadaba waa la soo dhaweynayaa.
S: Sideen ku heli karnaa tijaabooyin?
A: Noo soo dir foom codsi ah adoo nala soo xiriiraya bogga isla markaana iibkeenna iibka ah ayaa dhowaan la xiriiri doona. Badanaa, Waxaan ku bixinnaa muunad jirta bilaash, laakiin lacagaha dirista ayaa loo baahan yahay, Haddii aan amar gaari karno, warqadda dirista waa laga goynayaa dalabka.
A: MOQ-du waxay kuxirantahay walxaha aad dalbato. Waxaan aqbalnaa tiro hoose amarkaaga maxkamadaynta. Fadlan xor u noqo inaad noo sheegto tirada aad u baahan tahay.
S: Waa maxay muddada lacag-bixintaadu?
J: Waqtigeena lacag bixinta ee caadiga ah waa 30％ deebaaji, 70％ dheelitirka bixinta ka hor rarka. Waxaan sidoo kale aqbalnaa LC marka la eego.
S: Sidee ku saabsan waqtiga hogaanka?
J: Caadi ahaan waxaan u haynaa keydka moodooyinka iibka kulul ee alaabada caadiga ah.
--- Alaabada caadiga ahi waxay u baahan tahay 7-15 maalmood oo shaqo.
--- Badeecadaha loo habeeyay waxay u baahan yihiin 15-30 maalmood oo shaqo.
J: In ka badan 10 sano oo khibrad ah oo ku saabsan alaabada dibedda laga soo saaro ee warshadaha ah;
Hubinta Ganacsiga ee alaabooyinka u qalma iyo rarka waqtiga ku habboon;
Adeegga OEM & ODM ee Xirfadeed;
R&D khibrad u leh kooxda R&D si ay u daboolaan baahida suuqa;
Capacity Awood wax soo saar ballaaran oo leh nidaam xakameyn tayo leh oo adag; Hawlgal muddo-dheer ah oo leh sumcado caan ah gudaha iyo dibaddaba;